ဒီမြှင့်တင်ရေးတက်ကြွ 2nd ဖြစ်လိမ့်မည်, 9ကြိမ်မြောက်, 16ကြိမ်မြောက်, 23တတိယအကြိမ်မြောက်နှင့် 30 Septmeber 2016 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
ဆုကြေးငွေများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်, ကစားသမား£ 10 နိမ့်ဆုံးငွေသွင်းခြင်းနှင့်အာမခံရပါမည်.
ဤရွေ့ကားလှည့်ဖျား Atlantis ၏လျှို့ဝှက်ချက်များအပေါ် 20p တန်ဖိုးရှိနှင့်တရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ
ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီ၏အမြင့်ဆုံးခံရလိမ့်မည် 20 Atlantis ၏လျှို့ဝှက်ချက်များအပေါ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
အလှည့်ခြင်းများကစားသမားကိုသက်ဝင်နိုင်ရန်အတွက် Atlantis ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖွင့်ရမယ်
အလှည့်ခြင်းများကနေရရှိခဲ့ပါတယ်အနိုင်ရရှိ 30x ၏အာမခံလိုအပ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းဆုကြေးငွေပမာဏကိုသယ်လိမ့်မည်
သာကဤဂိမ်းအပေါ် wagering: Starburst, Gonzo ရှာပုံတော်, အမွှာလည်, Spinata Grande, ထုချွန်းပုံ, piggy စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်, South Park, ဂျက် Hammer, ချိတ်သူရဲကောင်းများ, ငါ့ကို dazzle, နီယွန် Stax, Dracula, ဂျက်နှင့် The Beanstalk, အောင်မြင်သော, ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Rush, အလင်းအိမ်, ဒစ္စကိုလှည့်ဖျား, Koi မင်းသမီး, ဒဏ္ဍာရီလာအိမ်ထောင်မကျခင်, Sparks, စတစ်ကာများ, မှော် Portal, Blackjack Classic, အသီးဆိုင်, ပန်းပွင့်, မျှော်စင် Steam, Fisticuffs, ကံကောင်း Angler, လေဆင်နှာမောင်းခြံနဲ့ Escape, Subtopia, ဂျက် Hammer 2, ဘစ်ဘန်း, invisible က Man, South Park2ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Chaos, slot ဘုရင်, ဂြိုလ်သား, တောက်ခြင်း, Guns N Roses, နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏မဟာ, မောင်း, Aloha, လူးစ Hendrix, ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား, Nrvna, ဝက် Fly အအာမခံလိုအပ်ချက်များ၏လျှော့ချရေးဆီသို့ဦးတည်ရေတွက်မည်သည့်အခါ
ကစားသမားတစ်ဦးတည်းသာ FreeSpin ဆုကြေးငွေတစုံတယောက်မျှအချိန်တွင်တက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပေးနေကြပါတယ်, သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး “ငါ့အကောင့်” သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုဆုကြေးငွေတန်းစီကြည့်ရှုရန်အပိုင်း